Gbochie weebụsaịtị anyị na ụfọdụ mba | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na ị nwere blog ma ọ bụ weebụsaịtị ma ịchọrọ igbochi ịnweta ozi gị na ọnụọgụ ụfọdụ nke ndị ọrụ N'akụkụ dị iche iche nke mbara ala, ị nwere ike nweta nke a ma ọ bụrụhaala na ị bụ onye nrụpụta weebụ ma mara ụfọdụ ngwa na ngwaọrụ dị n'ịntanetị.
O di nwute, obughi onye obula nwere udi ihe omuma a, ya mere aghaghi igbali jiri ngwa dị mfe nghọta dị mfe nghọta. Nke ahụ ga-abụ ebumnobi nke isiokwu a, n'ihi na ebe a anyị ga-ekwupụta ụfọdụ akụrụngwa ị nwere ike iji gbochie ịnweta weebụsaịtị gị, n'akụkụ dị iche iche nke ụwa.
1 Kedu ihe kpatara igbochi ịnweta weebụsaịtị na mpaghara ụfọdụ?
2 Ọnọdụ IP2
3 Ihe Mgbochi IP Mba
5 Software77 IP ka Ebe nchekwa data mba
Kedu ihe kpatara igbochi ịnweta weebụsaịtị na mpaghara ụfọdụ?
Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara na ị ga - anwa ime ụdị ọrụ a, ọ bụ ezie na oge a anyị ga - atụ aro obere ihe atụ nke enwere ike ịtụle dịka "izugbe"; enwere ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nchịkwa nke weebụsaịtị, ndị nwere ike na-ahazi asọmpi maka ndị ọbịa niile, ọbụna nke ahụ nwere ike ịtụgharị uche banyere onyinye (onyinye anụ ahụ) nke a na-aghaghị inye nanị na mpaghara mpaghara. Maka nke a, ịkwesịrị iduzi asọmpi ahụ naanị maka ndị ọbịa na-ebi n'otu obodo n'ihi na gaa ebe ọzọ, ọ ga-esiri gị ike iwebata ihe enyere gị.
«Ọnọdụ IP2»Ndi mbu nke anyi ga-ekwu n’oge a, nke bu ngwa oru ntanetị nke ga - enyere gi aka inweta adreesị IP, nke ị ga - emecha jiri mee ihe iji webata faịlụ .htaccess.
Ihe onyonyo ahu nke anyi tinyere n’elu ga-abu ihe atu nke ihe ikwesiri ime; ọ bụrụ na ị gawa họrọ otu mba iji gbochie ma ọ bụ nye ohere kwupụta na ebe nrụọrụ weebụ gị, ịkwesighi ịmebanye aha ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọtụtụ mba mgbe ahụ ị ga-eme ndenye aha n'efu nke data gị. Ntọala nke ghọrọ igodo maka ihe niile dị na akụkụ ikpeazụ, n'ihi na ebe ahụ ka ịhọrọ n'etiti:
Apache .htaccess Kwe Ka
Apache .htaccess agọnahụ
Na ngwụcha, ị ga - ahọrọ bọtịnụ nke kwuru "budata" iji budata ndepụta nke ị ga - abanye n'ime weebụsaịtị gị yana faịlụ .htaccess site na iji ndị ahịa ftp.
Ihe Mgbochi IP Mba
"Ihe eji egbochi IP IP" bụkwa ngwa ọrụ n'ịntanetị nke nwere ọrụ yiri nke a na mbụ, n'agbanyeghị na ị ga - enwe nhọrọ ole na ole ndị ọzọ nwere ike iji ndị mmepe web nwere ihe ọmụma dị elu.
Dị ka ọ dị na mbụ, ị nwekwara ohere ịhọrọ nke mba ị chọrọ "igbochi ma ọ bụ kwe" iji nweta ozi na weebụsaịtị gị; Na ala nke ndepụta nke mba ndị a bụ nhọrọ ndị a na ole na ole ọzọ a ghaghị ịhọrọ, site na igbe ha. Na njedebe naanị ị ga - ahọrọ bọtịnụ na - ekwu "Mepụta ACL" iji nweta ozi ị ga - emecha mebe ka ị banye na faịlụ .htaccess nke weebụsaịtị gị.
Ngwaọrụ a nwere interface enyi dị ukwuu karịa ndị ọzọ anyị kpọtụrụ aha n’elu. Lee ị ga - edenye aha ngalaba nke weebụsaịtị gị wee họrọ mba ndị ịchọrọ igbochi ịnweta ọdịnaya ya.
Ọrụ ntanetị a dị ugbu a dị ka ụdị onye inyeaka, nke ị ga-agbaso ruo mgbe ị nwetara faịlụ ahụ ị ga - emesị banye n'ime .htaccess nke weebụsaịtị gị.
Software77 IP ka Ebe nchekwa data mba
Ọ bụrụ n ’otu ihe kpatara na ịnweghị ike ijikwa ụzọ ndị ọzọ anyị kpọtụrụ aha n’elu, mgbe ahụ anyị na-akwado ịnwale ịrụ ọrụ arụnyere na«Omenala 77«, Nke ị ga - ahụ n’akụkụ aka nri ya.
N'ebe ahụ ka ị ga- họrọ obodo ichoro igbochi ohere na ozi na weebụsaịtị gị, wee gaa na nhọrọ nke na-ekwu "CIDR" na n'ikpeazụ iji "Nyefee". Site na ngwa ndị a niile anyị kpọtụrụ aha, ịnwere ike igbochi mpaghara dị iche iche na mbara ala dị mfe ka ha ghara ịnweta ọdịnaya nke weebụsaịtị gị. N'ezie enwere ndị ọzọ ndị ọzọ anyị nwere ike iji, nke ga-adabere na ikpo okwu nke ewubere weebụsaịtị gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na iji WordPress ị nwere ike iji ngwa mgbakwunye pụrụ iche (dị ka IP Blocker Mba) nke ga - enyere gị aka ịrụ ọrụ a, n’ụzọ dị mfe karịa nke ọ bụla ọzọ anyị kpọtụrụ aha n’oge a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Otu esi egbochi ịbanye na weebụsaịtị anyị na mba ụfọdụ
Jiri keyboard LED dị ka ihe ngosi nke ọrụ na netwọk mpaghara